लाहुरेमा भर्ती हुन नसकेपछि "लाहुरे"को उपनाम पाएका आशिषको यात्रा - Everest Talk
लाहुरेमा भर्ती हुन नसकेपछि “लाहुरे”को उपनाम पाएका आशिषको यात्रा1 min read
२०७६, १५ माघ बुधबार १०:१२
सङ्गीतको सागर धेरै गहिरो छ । यहाँ धेरै पौडन भनेर आउँछन्, र खै कसरी पौडन्छन् ? केही समयपछाडि गायब हुन्छन् । तर सङ्गीतमा कोही यसरी आउँछन् कि आएर सागरको किनारमा बसेर सागरभर राज गर्छन् ।
नेपाली हिपअपको इतिहास दुई दशकभन्दा लामो भने छैन । नेपाली र्यापरको नाम लामै भए पनि नेपाली भाषीले चिन्ने नाम भने सीमित रहेका छन् | त्यस्तै सीमित नाम मध्येको एक नाम हो, लाहुरे ।
सन् १९८९ मा पोखरामा जन्मिएका लाहुरको वास्तविक नाम भने आशिष राना मगर रहेको छ ।
नेपाली हिपअप क्षेत्रमा सन् २०१३ बाट सक्रिय रहेका लाहुरेले आफ्नो बाल्यकाल सम्झँदै बताउँछन्– “मसँग र्यापको किरा भने बाल्यकालबाटै रहेछ । म सानैमा र्याप गर्दोरहेछु ।”
जब गाउँमा देउसी भैलो सुरु हुन्थ्यो, उनी भट्याउन अगाडि जान्थे । उनीले देउसी भट्याउने शैली फरक थियो । अन्तिमका लाइन मिलाउँदै उनले भन्ने शैली नै उनको र्याप रहेछ भन्नेकुरा उनी आजकाल सम्झने गर्छन् ।
उमेरमा मान्छेलाई अनेक बन्न मन लाग्छ | र जिन्दगीमा बन्ने कुरा केही हुँदैन, तब मान्छे अनेक बन्छ । यो समयको सूत्र हो । आफूभित्रको प्रतिभा आफैँले नचिनेर आज कोही कतारमा छन् कोही अमेरिका पुगे । कोही हिमालमा आलु रोप्दैछन्, कोही पहाडमा रुखको घाँस झार्दैछन्, कोही तराइमा गहुँमा पानी लगाउने दिन कुर्दैछन् ।
पढाइमा अब्बल आशिषलाई पछि के बन्ने भन्ने कुराको कुनै सूत्र थाहा थिएन । एस.एल.सी. सकेपछिका उनका दिन हावासँगै उडेर गए । कलेज पुगेपछि साथीभाइसँगको रमाइलोमै दिनहरू बितेर गए । कलेज सकिएपछि उनी के गर्ने र कसो गर्ने ? भन्ने कुराको चेपमा परिहँदा सबै साथी लाहुरेको सपना देख्नमा मग्न थिए | कतिले त भर्तीको प्रक्रिया नै सुरु गरिसकेका थिए ।
पोखरा त्यसै पनि लाहुरहरूको अड्डा हो । यहाँ केही बनेन भने लाहुरे बनाउने वा लाहुरे बनेपछि जीवन सोचेभन्दा सजिलो हुन्छ भन्ने जमात ठूलो छ । आशिषले पनि साथीहरूको लहलहैमा लाहुरे हुने सपना बुन्न सुरु गरे । यसबीच नै उनको र्याप केही कदम अगाडि बढिरहेको थियो । तर उनको लहलहैले भने र्यापको यात्रा अन्तै मोडिएको उनले भान गरिरहेका थिए ।
‘साथीहरूसँग गइदिम न त’ भन्ने सोचले लाहुरे भर्ती हुन पुगेका आशिष जब फाइनल राउण्डबाट बाहिरिए, तब उनलाई मानसिक समस्याले सताउन सुरु गर्यो । उनी भन्छन्- “जब मान्छेले केही कुरामा अत्याधिक मिहेनत गर्छ, तर त्यसैमा फेल हुन्छ भने ऊ डिप्रसेनमा जानु स्वाभाविक हो ।”
आशिष राना मगर इनिमीको ठूलै फ्यान हुन् । उनले जीवनमा पहिलोपटक सुनेको र्याप पनि उनैको हो । स्कुल छँदा एक साथी आफ्नो परिवार भेट्न युके गए, र फर्कँदा आशिषलाई एउटा सिडी ल्याइदिएर आए । आशिषले सिडी पाए पनि केको हो भन्ने कुरा थाहा पाएनन् । त्यो समयमा सिडीमा पोर्न हेर्ने चलन थियो, भरे पोर्न कै पो हो कि भनेर आशिषलाई डर लाग्यो | र एकाबिहानै सिटिङ रुमको डेस्कटपमा उनले सिडी हेरे, र सुरु भयो र्याप सुन्ने कथा ।
र्याप के हो ? कसरी गर्ने ? कस्ता शब्द प्रयोग गर्ने ? भन्ने कुराको बृहत खोजको लागि आशिषलाई इन्टरनेटले ठूलै सहयोग गरेको छ । उनले धेरै कुरा इन्टरनेटकै माध्यमबाट सिकेको छन् | मिहेनत र सिक्ने इच्छा त उनको मनमा हुनु स्वाभाविक नै हो ।
उनी लाहुरे भर्तीको फाइनल राउण्डबाट आउट भएपछि डिप्रेसनमा गए । कसो-कसो आफैँलाई मोटिभेट गरेर उक्त समस्याबाट बाहिर आए ।
पोखरामा नै उनी बीबीएमा भर्ना भए । तर कलेज जानु उनलाई कुनै दूरको आफन्तको घरमा पाहुना जानुजस्तै थियो । मनै नलाग्ने । घरमा ‘जाँदैछु’ भने पनि उनी कलेज भने गइरहेका थिएनन् ।
उनको बुवालाई एकदिन प्रधानाध्यपकको फोन आयो । उनी कलेज गइरहेका छैनन् भन्ने कुरा घरमा पनि पत्तो लाग्यो । त्यसको भोलि बिहानै उनलाई उनको बुवाले कलेज छाडेर आए । कक्षाकोठामा उनी नितान्त एक्लो थिए । केही समयमा दौरा सुरुवाल लगाएको, फ्रेन्च दाह्री काटेको मान्छे आयो, र भन्यो- नयाँ हो ?
आशिषले ‘हो’ मात्र भने । ती नेपाली पोसाकमा आएका मान्छेले भने- “कत्ति पनि चिन्ता नलिनु ! कक्षा अगाडि बढेकै छैन ।” आशिषलाई ढुक्क भयो । तर उनको त्यो ढुक्कपन धेरैबेर टिक्न सकेन । जब कक्षामा प्रोफेसर आएर पढाए, तब आशिषले बुझे कि कक्षा निकै अगाडि पुगिसकेको छ । पछि थाहा पाए, जसले उनलाई ‘कक्षा कत्ति पनि अगाडि गएको छैन’ भन्ने गर्थे, उनी नै हिलोपटक कलेज आएका रहेछन् ।
लाहुरे भर्ती हुँदा हारेर आएको भनेपछि उनले ‘लाहुरे’को उपनाम पाए वा भनौँ उनलाई जिस्काउने नाम ‘लाहुरे’ बन्यो । नामाकरण त्यही नेपाली पोसाक लगाउनेले गरेका थिए । पछि लाहुरे उनैसँग धेरै मिल्न थाले, र एकअर्कालाई मितज्यु उपनामले बोलाउन थाले ।
लाहुरे नेपाली र्याप जगतमा आउनुपूर्व र्याप त्याटमा “वाइट स्याडो” नामले चिनिने गर्दथे ।
आशिष रानाउर्फ लाहुरे बहुप्रतिभाका धनी छन् । उनीसँगसँग स्वर मात्र छैन, अभिनय र अरूलाई जर्ज गर्ने क्षमता पनि उतिकै छ । त्यसैले त ताण्डव नामको चलचित्रबाट आफूलाई अभिनयमा पनि पोख्त छु भन्ने कुराको प्रमाण दिए । साथै, हिमालयन रोडिजमा जर्जको भूमिका निवार्हमा पनि उनी अब्बल देखिएका छन् ।
र्यापकै कुरा गर्ने हो भने पनि उनले साथी गणेशको सहायतामा “मेरो सोल्टा” गीत रेर्कड गरे | तर त्यो रेर्कड मोबाइलमा भएकाले क्वालिटीले उनलाई धोका दियो । गाउँको दाइहरूको सुझावअनुसार उनले रेर्कडिङ स्टुडियोमा गएर गीत रेर्कड गराए ।
उनी आफ्नो पहिलो कन्सर्ट सम्झँदै भन्छन् कि उनले तयारी गर्दा घरको ल्यापटपमा थुकका छिटा धेरै पर्यो । राष्ट्रिय कलाकारको सामुन्ने गाउनुपर्ने भएकाले उनले कडा मिहेनत गरेका थिए । र्याप यसै पनि झुण्डले सुन्न मन पराउँछ । तर उनलाई दिउँसै गाउन लगाइयो । जम्मा पन्ध्र जनाले उनको गीत सुने, र “आयोजकले मन पराए” रातिको कार्यक्रमको अन्तिममा फेरि गाउन दिने सम्भावना छ भन्ने सुने । कार्यक्रम सकिने बेलामा प्रहरीले कार्यक्रम अब रोक्नु भन्दै आदेश दिए । ‘गाउँकै केटो हो, एउटा गीत गाओस्’ भनेपछि उनले रातको भीडमा गीत गाउने अवसर पाए | उक्त गीत प्रहरीलाई पनि मन पर्यो । प्रहरीले लाहुरेलाई फेरि त्यही गीत गाउन लगाए ।
यसरी अगाडि बढेको आशिष रानाको र्यापको यात्रा अहिले धेरै पर पुगिसकेको छ । उनले देशमा तथा विदेशमा गरेर धेरै सोहरू गरिसेकका छन् ।
सर्वप्रथम सन् २०१४ मा “मेरो सोल्टा”बाट र्याप यात्रा सुरु गरेका उनले लगातार केस नं ४२०, हाउडे, हामी सबै लाहुरे, युद्ध, साथी होजस्ता चर्चीत र्यापमा आफ्नो स्वर दिइसकेका छन् ।
समाज र राजनीतीलाई दुरुस्तै र्यापमा ढाल्न सक्ने उनको खुबीप्रति सारा नेपाली रमाइरहेका छन् । आगामी दिनमा पनि उनले नेपाली र्यापमा राज गरून । यही शुभकामना छ ।
Tags: आशिष राना मगरलाहुरे